सीमा विवाद लम्बिनुमा हाम्रा नेताहरु कहाँ कहाँ चुके ? (भिडियो) | ईमाउण्टेन समाचार
सीमा विवाद लम्बिनुमा हाम्रा नेताहरु कहाँ कहाँ चुके ? (भिडियो)
जेठ २०, २०७७ पढ्न २ मिनेट
काठमाडौं, २० जेठ । अहिले मुख्य चर्चा र चासोको विषय संसदमा भएको बजेट माथिको छलफल र संविधान संशोधनको प्रस्ताव पेश गरेको लगायतका विषयहरु रहेका छन् । त्यस्तै, सीमा विवाद यथावत रहेको छ । संविधान संशोधनको प्रस्तावले औपचारिकत पाएको छ । र संसदमा पेश भैसकेको छ । अब न्पालको नयाँ नक्साले आधिकारिक रुपमा प्रवेस पाउने भएको छ । यसबारे प्रतिपक्ष र सत्तारुढ दल कसरी अगाडि बढ्लान् ? सतारुढ दल नेकपा भित्र फेरि विवाद तन्किएको हो? MCC बाट नेकपा फिर्ता हुन खोज्दै छ ? कालापानी क्षेत्रको सीमा विवाद नसुल्झनुमा नेकपा होस् वा कांग्रेस दुई पार्टी चुकेकै हो ? भन्ने सन्दर्भमा सत्तारुढ दल नेकपाका केन्द्रीय सदस्य, नेता ठाकुर गैरेसँग गरिएको अन्तर्वार्ता :
सीमामा भारतीय ज्यादती बढदो
लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्न सांसदको सुझाव